आलेख :: Kitab Kiro - Complete Book News
किताबको कभरलाई पाठकले कति महत्व दिन्छन् ? कभरले कन्टेन्ट बोक्छ कि बोक्दैन ? कस्तो कभर राम्रो ? राम्रो कभरमा कसकसको मेहनत परेको हुन्छ ? किताबको बिक्रीसँग कभरको के सम्बन्ध हुन्छ ? कभर भनेको बोक्रा मात्रै हो त ? कल्पना गर्नुस्– तपाईं एउटा विशाल पुस्तकालयमा हुनुहुन्छ, हजारौं किताबले भरिएको। केहीब ...
किताब विमोचन र ‘मार्केटिङ’को चमक
हालैमात्र हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनी ‘महको म’को विमोचन भव्य रूपमा भयो । कवि विप्लव प्रतीकको उपन्यास ‘अविजित’को विमोचन कार्यक्रममा त ककटेल डिनरै राखियो । कुनै कर्पोरेट इभेन्टभन्दा कम थिएन दरबारमार्गको क्लब डेजाभूमा ‘अविजित’को विमोचन कार्यक्रम । ‘महक ...